Home > Tigidhada Tareenka Trenitalia ee Jaban iyo Qiimaha Safarka
6. Maxay ku kala duwan yihiin Heerka Dhaqaalaha, Premium, Ganacsiga iyo Fulinta Trenitalia 7. Ma jiraa rukhsad Trenitalia ah
In 2005, ah Frecciarossa 1000, Khadka tareenka ee ugu dheereeya ee Trenitalia ayaa la bilaabay. Xawaaraha uu Frecciarossa 1000 Wuxuu gaarayaa 300km saacaddii.
Tareenka xawaaraha sare ku socda ee Trenitalia waa adeeg isku xira waqooyiga iyo koonfurta iyo bariga iyo galbeedka Talyaaniga iyo sidoo kale Talyaaniga iyo Switzerland, France, Austria, iyo Germany.
Tigidhada Trenitalia way ka jaban yihiin saacadaha shaqada badan yihiin, bilowga usbuuca, iyo inta lagu jiro maalinta iyo badhtamaha usbuuca safarada tareenka (Talaado, Arbacada, iyo Khamiista) had iyo jeer waxay bixiyaan qiimo jaban. Qiimaha ugu wanaagsan, ha qaadan tareenka Trenitalia subaxa hore iyo fiidka hore inta lagu jiro usbuuca (sababtuna tahay safarro ganacsi oo badan). Ka fogow haddii ay suurtagal tahay qaadista tareennada Trenitalia galabnimada Jimcaha iyo Axadda (ku habboon gubashada marinnada toddobaadlaha) iyo inta lagu gudajiro ciidaha dadweynaha iyo waliba xilliyada ciidaha iskuulka maxaa yeelay munaasabadahaan qiimaha tikidhada Trenitalia ayaa cirka isku shareeray.
Adeegga tareenka ee Trenitalia ayaa baahi weyn loo qabaa. Trenitalia Base train ticket can be exchanged and modified without limitation and the Economy Standard ticket can only be modified once before the train departure date. Ma beddelan kartid ama ma soo celin kartid tigidhada kale ee Trenitalia, laakiin waxaa jira gole internet oo aad ku iibin karto tigidhkaaga Trenitalia gacan labaad. Keydso Tareenka Tareenka ee loogu talagalay Safarka Trenitalia waa inaad ballansato markaad hubto jadwalka safarkaaga.
Waxaa jira Baasaboor loogu talagalay Talyaaniga, laakiin waxaa lagu talinayaa kaliya ikhtiyaar rakhiis ah haddii aad qorsheyneyso inaad tababarto safarka 14 maalmood, rukhsaddu waxay u oggolaaneysaa inay Talyaaniga ku baarto tareenno leh kaararka qaaska ah. Waxaa jira 3 heerarka gudbida ee la heli karo: Easy, raaxada, iyo Fulinta oo waxaad dooran kartaa tirada safarooyinka u dhexeeya 3 si ay u 10 oo ka dooro nooca tareenka mid ka mid ah xawaaraha sare ee xawaaraha illaa inta udhaxeysa iyo EuroCity.
Naples terminal waa bariga magaalada Old. Haddii aad qorsheyneyso inaad xoogaa sameyso safar-maalmeedka ka socda Naples ilaa Pompeii ama Sorrento, ka dib waad iska joogsan doontaa saldhigga tareenka Naples safarkaaga tareenka.
Tareennada Trenitalia waxay leeyihiin qorshe loogu talo galay cabitaannada-kafateeriyada-kafeega oo loogu talagalay cabitaannada iyo cuntada fudud. Liistada waxaa ku jira ismaris, shukulaatada shukulaatada, cunto fudud, baararka shukulaatada, kafeega, shukulaato kulul, iyo shaah waxaadna markaas ku cuni kartaa oo ku cabbi kartaa gaariga makhaayadda ama waxaad ku gadan kartaa wixii aad ku soo celisay kursigaaga. Haddii aad safar ku gasho Meheradda, Premium, ama fasalka Koowaad waxaad ka dooran kartaa cabitaan soo dhaweyn oo bilaash ah ikhtiyaar ah 9 cabbitaannada la heli karo iyo macaan, macaan, or gluten-free snack. Dhamaan tareenada Trenitalia, waxaa ku yaal boosas koronto oo ku xiga kursigaaga.